August 2015 - သန်လျင်သားနည်းပညာ
မင်္ဂလာပါ photoshop ညီလေးတွေ ကိုယ်ကြီးတွေ အတွက် Adobe Photoshop CC 2015 (20150529.r.88) (32+64Bit) သုံးချင်ရင်တော့ Adobe Photoshop CC 2015 လေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:54:00 1 comment:
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် Water effect ရေဒီဇိုင်း (PNG )ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ တောင်ဆိုလာတဲ့ ညီလေးနဲ့ လိုနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေ အတွက် ရေ လှိုင်း ဒီဇိုင်းလေးတွေတင်ပေး လိုက်ပါတယ်၊ ဒီဇိုင်လုပ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ အတော်လေးအ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:40:00 No comments:
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် headstones_01 အုပ်ဂူဒီဇိုင်း(PNG)ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ တောင်းထားတဲ့ ဦးဇင်းနဲ့ အတူလိုနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် လာပါပြီ headstones_01 အုပ်ဂူဒီဇိုင်း(PNG)ဖိုင် ပါဝင်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေအောက်မှာ ကြ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:35:00 No comments:
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် skull_stock_1 လူခေါင်းရိုးဒီဇိုင်း(PNG) ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ တောင်းထားတဲ့ ဦးဇင်းနဲ့ အတူ လိုနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေနဲ့ ညီလေးတွေအတွက် ရှာထားသမျှထဲ မှ skull_stock_1 လူရိုးခေါင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဒ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:30:00 No comments:
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် helmet_1 ယောမဦးထုပ်ဒီဇိုင်း(PNG)ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ ဒီတစ်ခါတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် helmet_1 ယောမ ဦးထုပ်ဒီဇိုင်း(PNG)ဖိုင် ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တင်သမှ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 07:26:00 No comments:
Photoshop သုံးနိုင်မယ့် kronos အရိုးခေါင်းဒီဇိုင်း (PNG) ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ Photoshop သုံးနိုင်မယ့် kronos အရိုးခေါင်းဒီဇိုင်း (PNG) ဖိုင် လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဒီဇိုင်းတွေလိုနေတဲ့ သူတွေအတွက် တက်နိုင်တဲ့ ဘက်မ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 06:48:00 No comments:
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် dragon_zombie ဒီဇိုင်း (png) ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ photoshop မှာ သုံးနိုင်မယ့် Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် dragon_zombie ဒီဇိုင်း (png) ဖိုင် လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ လိုအပ်မယ်ထင်ပြီးြ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:16:00 No comments:
3D chain_stock ချိန်းကြိုးများ ဒီဇိုင်း (PNG) ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ photoshop ဒီလုပ်တာဝါဒနာပါတဲ့ဘော်ဘော်တွေ အတွက် ရှာရလဲ ခတ်တဲ့ 3D chain_stock ချိန်းကြိုးများ ဒီဇိုင်း (PNG) ဖိုင် ကိုတွေ့ လို့ တင်ပေး...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:42:00 No comments:
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် abstract brushset-vii ဒီဇိုင်း(ABR) ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် abstract brushset-vii ဒီဇိုင်း(ABR) ဖိုင် လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇိုင်းလေးတော့ ပုံမှာ ကြည့်ပြီးဒေါင်းသွ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:23:00 No comments:
photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် splatter_01 ဒီဇိုင်း (abr) ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ photoshop သုံးနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် splatter_01 ဒီဇိုင်း (abr) ဖိုင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးဒီဇို...
Photodex ProShow Producer And Gold v.7.0.3518
မင်္ဂလာပါ Photodex ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ဆော့ဝဲတခုဖြစ်တဲ့ ProShow နောက်ဆုံးထွက် Version ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီ Version မှာ ProShow Produce...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:37:00 No comments:
Wise Care 365 Pro v3.82.339 Multilang WinAll Cracked (13.4 Mb)
မင်္ဂလာပါ All in One Cleaner and Optimizer ဆော့ဝဲတခုဖြစ်တဲ့ Wise Care 365 Pro v3.82.339 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ASC ကဲ့သို့ ဖိုင်ဆိုဒ်မကြိးဘဲ စ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:08:00 No comments:
BlueStacks v0.9.30.4239 Rooted [Offline]- (453 Mb)
မင်္ဂလာပါ ကွန်ပျူတာမှာ ဖုန်းတစ်လုံးလို ကစားနိုင်တဲ့ BlueStacks App Player နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Version ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီ Version မှာ Blue...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:55:00 No comments:
photoshop- ပုံဒီဇိုင်းများ ရှာရန်
photoshop မှာသုံးရန် သစ်ရွက်ဒီဇိုင်း PNG ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ photoshop မှာသုံးနိုင်ရန် သစ်ရွက်ဒီဇိုင်း PNG ဖိုင် လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ အောက်မှာ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ...
Labels: photoshop- ပုံဒီဇိုင်းများ ရှာရန်
Photoshop မှာသုံးနိုင်တဲ့ တောင်ပျံတစ်စုံ(psd) ဖိုင်
မင်္ဂလာပါ phoroshop မှာ အလံယ်သုံးနိုင်မယ့် အတောင်ဒီဇိုင်း (Psd) လေးကိုမရှာတက်တဲ့ဘော်ဘော် တွေအတွက် ရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ လိုအပ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:04:00 No comments:
Labels: photoshop- ပုံဒီဇိုင်းများ ရှာရန်, တောင်ပျံဒီဇိုင်းများ
Moments Life 033909170 - Project for After Effects (83.1 Mb)
မင်္ဂလာပါ Adobe After Effects အတွက် Project ဆော့ဝဲလေးပါ။Photo-Video လုပ်တဲ့ Project တခု ဖြစ်ပြီး Tutorial Video နဲ့အတူ နမူနာ Preview ပါ ပါဝ...
Photo Wall Gallery - Project for After Effects (415 Mb)
Adobe After Effects အတွက် Photo Wall Gallery Project ဆော့ဝဲလေးပါ။Adobe After Effects အတွက်ဒီလို Projects တွေက ရှာရခက်တာမို့ လိုအပ်သူများ ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 06:47:00 No comments:
ကွန်ပြူတာ Desktop မှာ အွန်လိုင်း ရေဒီယိုလေးထားပြီး သီချင်းတွေ နားထောင်ကြရအောင် Radio Tuna (4.00 Mb)
မင်္ဂလာပါ ဖိုင်ဆိုဒ်သေးသေးလေးနဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းမျိုးစုံ အပုဒ်ရေပါင်း များစွာကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးပြီး အလွယ်တကူနားထောင်နိုင်တဲ့ အရမ်းလန်း...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:01:00 No comments:
RadarSync PC Updater 4.1.0.16651 (13.1 Mb)
မင်္ဂလာပါ Windowsအတွက် Up to Date Drivers and Softwares များကို Scan လုပ်ပြီးDownload and Install လုပ်ယူနိုင်တဲ့ Updater ဆော့ဝဲလေးပါ။မသုံးဘူး...
WinRAR v 5.3 Registered AIO (32-bit+64-bit) - (3.38 Mb)
မင်္ဂလာပါ Registered လုပ်ပြီးသား WinRAR နောက်ဆုံးထွက် Version အသစ်ကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။32-bit နဲ့ 64-bit အတွက် တဖိုင်ထဲဖြစ်ပြီး System ၂-မ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 12:01:00 No comments:
Facebook မှ video တွေကို အလွယ်ဒေါင်းပေးမယ့် app (2) ခု
မင်္ဂလာပါ တောင်းလာတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် Facebook မှ video တွေကို အလွယ်ဒေါင်းပေးမယ့် app (2) နှစ်မျိုးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ လုပ်နည်းကတော့ ဘာမှမခတ် ...
FastStone Capture 8.2 + Key + Portable (11.5 Mb)
မင်္ဂလာပါ Windows အတွက် Screen Capture Software တခုဖြစ်ပြီးဖိုင်ဆိုဒ်လဲသေးတဲ့ FastStone Capture 8.2 + Key+Portable ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Instal...
ESET Endpoint Security + ESET Antivirus 6.2.2021.1 (133 Mb)
မင်္ဂလာပါ Keys များ၊Trail Resetter များသုံးစရာ မလိုတဲ့ Acttivated လုပ်ပေးထားတဲ့ ESET Endpoint Security + ESET Antivirus RePack Versionကိုတင်...
Avast! Pro Antivirus & Internet Security 2015 10.3.2225 Incl Lic Files (394 Mb)
မင်္ဂလာပါ 2017 အထိလိုင်စင်သက်တမ်းရပြီး Antivirus ဆော့ဝဲကောင်းကောင်းသုံးလိုသူများအတွက် Avast! Pro Antivirus & Internet Security 2015 နောက်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 01:18:00 No comments:
TweakBit FixMyPC 1.6.9.6 + Portable (40.2 Mb)
မင်္ဂလာပါ လိုအပ်နေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက်Cleaner,Optimizer,Repair and Speed Up ဆော့ဝဲ တခုဖြစ်တဲ့ TweakBit FixMyPC ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ In...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 21:48:00 No comments:
Google Earth Pro.7.1.5.1557 (30.1 Mb)
မင်္ဂလာပါ လိုအပ်နေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် Google Earth Pro ကိုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးရဲ့နေရာအနှံ့ကို အလွယ်တကူကြည့်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ တခုပါ။ ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 21:44:00 No comments:
photoshop ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှု (32.2 MB)
မင်္ဂလာပါ လာပါပြီ photoshop လေ့လာနေတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ် ဆုံးလေလာနိုင်အောင် photoshop ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှု ဆိုပြီး ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 06:43:00 No comments:
ArcSoft Perfect365 One-Click Makeover v1.8.0.1 with key [h33t] (17.7 MB)
မင်္ဂလာပါ တောင်းလာတဲ့ဘော်ဘော်တွေများလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Perfect365 ကြိုတ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် အမြဲသုံးနိုင်အောက် key အပါ၊ရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:36:00 No comments:
Photoshop နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးဒီဇိုင်းလုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်သိထားသလောက်photoshop နည်းပညာလေးထဲမှ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးဒီဇိုင်းလုပ်နည်း လေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ နည်းလေးကို video အသံဖိုင်လေးနဲ့ တက်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 13:06:00 1 comment:
Windows 10 Permanant Activator [KMSpico] - (2.81 Mb)
မင်္ဂလာပါ Windows 10 သုံးနေသူများအတွက် Activate လုပ်နိုင်ရန်Windows 10 Permanant Activator [KMSpico] ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဘော်ဘော်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:06:00 1 comment:
မိမိတို့ ရိုးရိုး window တွေကို အလန်းလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် လက်ဆောင်အနေနဲ့ မိမိတို့ ရိုးရိုး window တွေကို အလန်းလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာလေးကို ...
Labels: နည်းပညာ (video)ဆိုင်ရာ
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် Water effect ရေဒီဇိုင်း...
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် headstones_01 အုပ်ဂူဒီဇ...
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် skull_stock_1 လူခေါင်း...
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် helmet_1 ယောမဦးထုပ်ဒီဇ...
Photoshop သုံးနိုင်မယ့် kronos အရိုးခေါင်းဒီဇိုင်း...
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် dragon_zombie ဒီဇိုင်း ...
3D chain_stock ချိန်းကြိုးများ ဒီဇိုင်း (PNG) ဖိုင...
Photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် abstract brushset-vii ဒ...
photoshop မှာသုံးနိုင်မယ့် splatter_01 ဒီဇိုင်း (a...
Wise Care 365 Pro v3.82.339 Multilang WinAll Crack...
BlueStacks v0.9.30.4239 Rooted [Offline]- (453 Mb)...
Photoshop မှာသုံးနိုင်တဲ့ တောင်ပျံတစ်စုံ(psd) ဖိုင...
Moments Life 033909170 - Project for After Effects...
Photo Wall Gallery - Project for After Effects (41...
WinRAR v 5.3 Registered AIO (32-bit+64-bit) - (3.3...
Facebook မှ video တွေကို အလွယ်ဒေါင်းပေးမယ့် app (2...
ESET Endpoint Security + ESET Antivirus 6.2.2021.1...
Avast! Pro Antivirus & Internet Security 2015 10.3...
ArcSoft Perfect365 One-Click Makeover v1.8.0.1 wit...
Windows 10 Permanant Activator [KMSpico] - (2.81 M...
မိမိတို့ ရိုးရိုး window တွေကို အလန်းလေးဖြစ်အောင် ...
computer မှာသုံးရမယ့် pack gatgets (14.3 MB)